‘खानेपानी नै छैन, के ले हात धुने ?
शुक्रबार २१ चैत, २०७६
पूर्णप्रसाद मिश्र, काठमाडौँै । कोरोना भाइरस (कोभिड —१९ ) को सम्भावित जोखिम हुनबाट जोगिन साबुन पानीले दिनमा चार पाँच पटक हात धुनुपर्छ भन्ने सन्देश सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह गरिरेहेको छन् । तर गोकर्णेश्वर तथा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका स्थानीयवासी खानेपानीकै समस्यामा परेका छन् । पटक पटक हात धुन पानी कसरी जुटाउने अहिले यस क्षेत्रका स्थानीवासीको चिन्ताको विषय बनेको छ । ती दुई नगरपालिकाले चोक चोकमा हातधुने व्यवस्था मिलाइका छन् । हाल राजधानीमा सबैभन्दा बढी खानेपानी आपूर्ति गर्ने वाग्मतीको मुहान पनि यही भेगमा पर्छ । सोलुखुम्बुबाट गोकर्णेश्वर नगरपालिका–२ मा घर बनाइ बस्नुभएका ग्याल्जेन शेर्पा धारामा खानेपानी पाइन्छ भन्ने सुनेकै कारण आफू यहाँ बस्न आएको तर पानी पाउन नसकिएको गुनासो गर्नुहुन्छ ।
समितिमा खानेपानी मन्त्रालय, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, लिमिटेडको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका अधिकारी सदस्य छन् । लकडाउनका कारण मेलम्चीको काम पनि बन्द भएकाले पानी आउने समय केही पछि धकेलिन सक्ने जनाइएको छ । रासस
बिहानै ट्रकले ठक्कर दिँदा रिक्सा चालकको मृत्यु
आकाशमा किन घुम्दैछन् नेपाली सेनाका नाइटभिजन हेलिकोप्टर ?
रवि लामिछानेको टेलिभिजन स्टार प्रस्तोताले भरियो, नम्वर वान बन्ने संकेत
नेपालको विकास देखेर विश्व आत्तिसक्यो : प्रधानमन्त्री ओली